Obama: aniga ayaa amray hawl galka dilka - BBC News Somali
Obama: aniga ayaa amray hawl galka dilka
2 Maajo 2011
Image caption Madaxweyne Obama oo dilka Bin Laden ka hadlaya
Madaxweyne Obama ayaa caddeeyay inuu hawsha CIA-da Maraykanka meel sare oo muhiim ah ka geliyay inay Bin Laden soo dilaan, uuna isagu mar walba mas'uul ka ahaa hawl galka lagu dilay Bin Laden. waxaa uu CIA-da la yeeshay shan kulan bishii March si looga wada xaajoodo tafaasiisha wax wararku ku tilmaameen weerarka qalliinka.
Madaxweyne Obama waxaa uu amarka lagu soo dilayo Bin Laden uu bixiyay maalintii Jimcihii dhowaa. Waxaa uu sheegay inuu waqtigaas go'aansaday in la hayo warar ku filan in lagu hawl galo sidaasi darteed uu amar siiyay koox yar oo Maraykan ah oo leh geesinimo iyo karti dheeraad ah inay Bin Laden sharciga hor keenaan.
Bin Laden waxaa lagu dilay guri qurux badan oo Villa ah oo ku yaal dalka Pakistan oo aan telefoon ku jirin, taas oo ceeb ku noqotay ciidammada amaanka ee Pakistan oo muddo dheer uu Bin Laden agtooda ku noolaa iyagoo aan ka warqabin.
Dagaalka lagu dilay waxaa uu socday 40 daqiiqo hase ahaatee muddoo sannad ka badan ayaa Maraykanku la socday dhaqdhaqaaqiisa iyo meesha uu deggan yhay. Waxaana loo maleynayaa in guriga uu degganaa loo dhisay si Bin Laden loogu qariyo oo keliya.
Madaxweyne Obama waxaa uu eheladii Maraykanka ee dadkoodii lagu dilay weerarradii September 2001-dii u sheegay in caddaalad ay dhacday.